Costa Rica 2018: Ny zavatra lehibe manaraka amin'ny fahasalamana
Home » Travel Associations News » Costa Rica 2018: Ny zavatra lehibe manaraka amin'ny fahasalamana
Janoary 16, 2018
Ny fehezan-teny hoe "Pura Vida" dia heno maneno manerana an'i Costa Rica.
Ny birao fizahan-tany Costa Rica (TIC) dia nanangana paikady fizahan-tany vaovao ho an'ny taona 2018 –'Wellness Pura Vida '- etona vaovao iray izay mamaritra ny dikan'ny hoe mikarakara vatana sy fanahy. Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny "burnout", ny toetry ny harerahana ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary ara-batana vokatry ny fihenjanana tafahoatra sy maharitra, dia olana manerantany ankehitriny. Hiadiana amin'izany dia mampifangaro hatrany ny fitsangatsanganana amin'ny fahasalamana ny mpivahiny, fironana iray izay novalian'ny birao fizahan-tany amin'ity hetsika vaovao ity ho an'ny taona 2018.
Ny fehezan-teny hoe "Pura Vida" mihitsy dia azo heno manerana an'i Costa Rica. Natao ho fiarahabana na fanehoam-pahasambarana, ilay andianteny nadika ara-bakiteny hoe "fiainana madio", na izany aza ny dikany marina dia "feno fiainana", izay maneho tsara ny saina sy angovo positivism miandry ny mpitsidika an'i Costa Rica.
Mauricio Ventura, minisitry ny fizahan-tany dia manazava fa "Miaraka amin'ny Wellness Pura Vida, izahay dia mitady ny hametraka ny firenena ho iray amin'ireo toeran-kaleha lehibe indrindra eto an-tany, manome traikefa miavaka sy manova, izay manatsara ny kalitaon'ny fiainan'ny mponina sy ireo mitsidika anay. ”
Eo ambanin'ny paikady vaovao 'Wellness Pura Vida', ny TIK dia:
 Miara-miasa amin'ireo mpandray anjara manan-danja mba hananganana amin'ny fanolorana vokatra efa misy
 Miaraha miasa amin'ny mpitondra eo an-toerana mba hahazoana antoka fa ny tombotsoan'ny fizahan-tany dia mahasoa ny mpiara-monina
 Mampiroborobo ny fampiasana ny teknikan'ny fahasalamana farany, fa miantoka ny fananan'izy ireo ny 'Tico twist' (Tico no teny tsy ara-potoana an'ny Costa Rican); mampiditra singa toy ny hetsika, fanatanjahan-tena ary ny fanentanana ataon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana - fihetsika 360 degre amin'ny fiadanam-be izay mampiavaka ny firenena amin'ireo mpifaninana iraisam-pirenena aminy.
 Mampiroborobo ny maha-zava-dehibe ny fampitomboana ny fizahantany ara-pahasalamana nefa tsy manimba ny tontolo iainana
 Mampiroborobo ny gastronomie eo an-toerana sy vazimba teratany ao anatin'ny fanolorana fahasalamana
Costa Rica dia manolotra traikefa momba ny fahasalamana voajanahary marobe ho an'ny mpitsidika rehetra mitady fialantsasatra fanasitranana. Ireto hetsika ireto dia misy ny yoga, fisaintsainana, fanotofana tany, fandroana ala, fitsaboana amin'ny loharano mafana, thalassotherapy ankoatry ny hafa, ary azo tanterahina amin'ny toerana voajanahary mahafinaritra sy milamina manerana ny firenena. Volkano fifohana sigara, ala virijina matevina, bibidia tsy manam-paharoa ary torapasika tropikaly tsy manam-petra no mahatonga an'ity paradisa amerikana afovoany ity ho iray amin'ireo toerana maro samihafa eto ambonin'ny tany amin'ny fialantsasatra fanasitranana. Zahao ny fanatontosana ireo traikefa tsara indrindra eto Costa Rican malaza dimy eto ambany:
1. Mifandray amin'ny natiora amin'ny fihemorana amin'ny fahasalamana
Costa Rica no toerana hampiatoana an'izao tontolo izao. Ny mpitsidika dia afaka miova teknolojia sy mibitsika ho an'ny fivoriana yoga mamelombelona ao anaty ala mandriaka, dia an-tongotra mandritra ny andro mitataovovonana ary lesona amin'ny surf any an-tanàna any amin'ny tanàna amoron-tsiraka Karaiba. Afaka mamerina mamerina amin'ny laoniny indray izy ireo amin'ny trano fandraisam-bahiny iray ao amin'ny firenena, izay ny ankamaroany dia manana mpitsabo izay mifantoka amin'ny sain'ny vatana.
2. Miaina ny fomba fiaina Pura Vide
Costa Rica dia tsy vitan'ny hoe malaza amin'ny maha-iray amin'ireo toerana sambatra indrindra eto an-tany, fa toerana iray onenan'ny olona lava indrindra koa. Ny Saikinosin'i Nicoya dia iray amin'ireo isan-jato isan-jaton'ny zato taona manerantany, ary ny faritra dia nambara ho 'faritra manga' ofisialy (iray amin'ireo faritra ara-jeografika dimy eto an-tany misy ny olona maharitra statistika indrindra) avy amin'ny mpikaroka sy mpikaroka Dan Buettner.
Tokony hiaina izany fomba fiaina 'Pura Vida' izany ny mpitsidika raha any Costa Rica, maka fahazarana mahasalama vaovao, manomboka amin'ny sakafo mahasalama mifototra amin'ny voamadinika, anisan'izany ny vary sy tsaramaso (antsoina hoe "gallo pinto" rehefa mifangaro). Tsy misy fitsangatsanganana raha tsy misotro ny rano be kalsioma, manaram-po amin'ny voankazo vaovao ary maka santionany ny kafe eo an-toerana. Ny traikefa amin'ny fahasalamana Pura Vida hafa dia mety ahitana ny 'fandroana ala' (miaina amin'ny rivotra madio any anaty ala) sy ny 'tany' (fitsangantsanganana tsy misy kapa amin'ny tany / fasika). Tsy azo antoka ny hahatratra 100, fa ny fialan-tsasatra!
3. Atsofohy ny radara
Ireo mpitsidika manantena sombin-tanin'i Zen dia tokony hidina amin'ny zoron'ny Costa Rica tsy fantatra loatra - ny Saikinosin'i Osa. Any amin'ny morontsirak'i Pasifika atsimo, ity faritra ity dia toeram-pialofana ho an'ireo izay maniry hiaina hatsaran-tarehy tsy misy fotony ary handositra Wi-Fi. Ny fotoana ahafahana mitrandraka dia tsy misy farany; Anisan'ny hetsika malaza ny fijerena ny fifindra-monan'ny trozona mahery, ny fizahana ny ala honko amin'ny alàlan'ny kayak sy ny morontsiraka ary ny tendrombohitra amin'ny fitsangatsanganana bisikileta fialamboly, fijerena vorona, yoga, fandroana ala ary fisakafoanana ara-organika mahasalama eo amoron-dranomasina. Io faritra io koa dia misy ny Corcovado National Park, ny valan-javaboary lehibe indrindra ao Costa Rica ary fonenan'ireo bibidia miavaka indrindra eto an-tany.
4. Mianara zava-baovao
Ary koa amin'ny maha toeram-pitrandrahana rano mahavelona anao dia kianja filalaovana traikefa i Costa Rica. Ny fahazotoana sy ny fivoahana any ivelany dia lafiny iray lehibe amin'ny fomban'ny 'Pura Vida' ary zavatra iray izay ampahany lehibe amin'ny fialantsasatra ara-pahasalamana ho an'ny firenena. Ny mpitsidika dia afaka manantena ny fiposahan'ny yoga, ny Pilates amoron-dranomasina ary ny fisaintsainan'ny vondrona al fresco. Na izany aza dia afaka mianatra zava-baovao sy manahirana ihany koa izy ireo, toy ny surf, soavaly mitaingin-tsoavaly, fijerena vorona ary fidirana an-tsambo.
5. Ankafizo ireo loharano mafana amin'ny volkano
Tsy misy fialantsasatra ara-pahasalamana any Costa Rica raha tsy misy fitsidihana ireo loharano mafana, izay voalaza fa manana fanasitranana sy fananana famerenana amin'ny laoniny noho ny habetsahan'ny mineraly avo. Ny mpitsidika dia afaka manamboatra ny rano amin'ny fanavaozana azy manokana amin'ny alàlan'ny famelana ny angovo miabo hivezivezy manerana ny vatana. Arenal, Rincon de la Vieja, Miravalles Volcano, faritra Orosi, Perez Zeledon ary Karaiba no toerana tsara indrindra ho an'ny rano mafana, ny sasany amin'ireny dia mirehareha amin'ny loharano mafana, fandroana fotaka ary fotodrafitrasa spaoro be indrindra.
Lufthansa Munich: Tongava haingana any
Maverick Helicopters dia manitatra ny asan'ny Hawaii any Kauai, Hawaii